Soosaarayaasha Cookie-ga | Shiinaha Kukliyeyaasha Kumbiyuutarrada & Warshad
26 PCS Alphabet Cookie Cut for Kids, Fondant, Sandwich, Cake, Qudaar khudradeed DIY Cookie Biskut Cutter Set qurxinta Qalabka ahama waraaqaha dubista wasakhda
Material Waxyaabaha Tayada Bixiya】 Waxyaabaha loo yaqaan 'cookie jaraya' waxay ka samaysan yihiin 430 bir bir ah, miridhku u adkaysto, daxalka u adkaysta, kana adkeysi badan birta caadiga ah. BPA bilaash ah, dib loo isticmaali karo, waari kara oo aan dheg-dheg lahayn, si sahlan loo nadiifin karo, geesaha laaban ayaa naxariis u leh gacmaha. Qalaji gebi ahaanba kahor intaadan keydin. ABC Mini letter Molds】 xirmo waxaa kujiray 26 Pcs Alphabet AZ Cookie Cutters oo leh sanduuqa finanka ee PET. Waraaqaha A illaa Z ha kuu ogolaato inaad isku darsato xarfaha Ingiriisiga oo kala duwan si aan macquul ahayn si aad u sameysid buskud ama cookies noocyo kala duwan leh ...